महिनावारीका बेला के गर्ने ? | समाचार
महिनावारीका बेला के गर्ने ?
September 5, 2021 NepstokLeaveaComment on महिनावारीका बेला के गर्ने ?
हरेक महिना महिलालाई महिनावारी हुनु सामान्य हो । प्राकृतीक रुपमै किशोर अवस्थापछि वयस्कसम्म महिलालाई हरेक महिना महिनावारी हुने गर्दछ । महिनावारीको क्रममा महिलामा विभिन्न शारीरिक र मानसिक परिवर्तन हुने गर्दछ ।
महिनावारीमा महिलाले आफ्नो पार्टनर श्रीमानसँग सहयोग र सहानुभूतीको आशा गर्दछन् । आशा अनुरुप नतिजा पाए महिलाहरुको आधा पीडा कम हुने गर्दछ । पुरुषले महिला महिनावारी हुँदा फोहोर वा असामान्य गतिविधीको रुपमा व्यवहार गर्नु हुँदैन । त्यसो भए महिनावारीको क्रममा पुरुषले के गर्ने त ?
– महिनावारी भएको बेला पुरुषले आफ्नो पार्टनरलाई कामकाजमा सहयोग गर्नु पर्दछ ।
– यो बेला महिलामा शारिरिक र मानसिक परिवर्तन हुने हुदाँ उनको मुडलाई बुझ्नु पर्दछ ।
– महिनावारीमा महिलामा चिड्चिडापन बढ्ने गर्दछ, त्यसैले उनलाई दिक्क लगाउनु हुदैँन ।
– महिनावारी हुँदा पेट दुख्छ त्यसैले यसलाई समाधानको कोशिस गर्नु पर्दछ ।
– यो बेला श्रीमानले हट वाटर ब्याग दिएर पेट दुखाईबाट राहत पाउन सघाउनु पर्दछ ।
– डार्क चकलेटमा हुने फ्लेवनाइड्सले मूडलाई राम्रो बनाउँछ, त्यसैले यो ख्वाउन सकिन्छ ।
– केरा, मेवा जस्ता फलफूल र हरिया तरकारीले महिनावारीको समस्यालाई कम गर्दछ ।
– महिनावारीमा कम्मर दुख्ने हुन्छ त्यसैले हल्का हातले मसाज गर्दा यसले राहत दिन्छ ।
– यो बेला हल्काफूल्का व्यायाम वा योगाबाट पेट र ढाड दुखाईबाट राहत प्राप्त हुन्छ ।
– महिनावारी हुँदा शरिरमा जति पानी हुन्छ, पीडा त्यति नै कम हुने गर्दछ ।
– पार्टनरलाई महिनावारी हुँदा धेरै काम गर्न नदिने, आराम गर्दा समस्या कम हुन्छ ।
– यो बेला पार्टनरलाई चिया–कफी वा मसालेदार खानेकुरा नदिने । यसले पीडा बढाउँछ ।
– यदि रक्तश्राव अत्यधिक भइरहेको छ भने तुरुन्तै डाक्टरलाई भेट्न जानु पर्दछ ।
महिनावारीका बेला महिलाले किचनमा जान नहुने, खानपिनका वस्तुहरु छुन नहुने जस्ता भ्रममा पर्नु हुदैँन । यसमा कुनै पनि वैज्ञानिक आधार छैन । केवल सफाईमा ध्यान दिएर महिलाले अन्य बेलामा झै जे पनि काम गर्न मिल्दछ ।विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा
खतरनाक मानिएको कालो ढुंसीका बिरामी नेपालमा पनि बढ्दै, कति जना छन् संक्रमित ?
बाघको आ क्रमणमा परी सोमबार एक भारतीय नागरिकको मृत्यु